Indlela yokudala i-backlink ngokusekelwe kumagama akho angukhiye afanelekayo?
Umqondo owaziwayo wokuthi ukusebenza kwe-injini yokusesha akukwazi ukukhona ngaphandle kwamagama angukhiye njengoba kukhona, empeleni, akukho ezinye izindlela amakhasimende akho angase athole umthombo wakho wewebhu kumiphumela yosesho. Ngakho, kuyisisekelo esiyi-SEO. Kungenakwenzeka ukwandisa iwebhusayithi yakho nokuqukethwe uma ungaqhubi ucwaningo lwegama elingukhiye. Uma ungenayo amagama angukhiye owawukhomba, ukukhushulwa kwakho kwe-SEO akuyona into enengqondo.
Namuhla, ukukhuphula uhlu lwamagama osesho olufanele nephezulu ohlosiwe akulona oluyinkimbinkimbi kakhulu. Kodwa-ke, ukwazi ukuthi kuthatha ukuthatha isikhundla sokuba ngamunye wabo kungabonakala kunzima kakhulu. Njengoba abaningi abathengisi be-intanethi basebenzisa amathuluzi okucwaninga angamagama angukhiye, baphela ngeziphakamiso ezifanayo zomkhakha owodwa.
Nokho, uma ukhuluma ngamathuluzi okucwaninga wegama elingukhiye we-key njenge-Semalt Auto SEO, i-Moz nezinye. Ababuye batshele abathengisi ukuthi kunzima kangakanani ukubeka isikhundla sokuqala ngegama elinikeziwe lokusesha. Ngenkathi bangakunikeza umbono, futhi akuyona into eyiyo eyi-100%. Uma uzibuza ukuthi kungani abakwazi ukukunikeza ngemiphumela yekhwalithi ephezulu ngemali yakho, ngizokuvula imfihlo. Akekho owazi kahle ukuthi i-Google ihlanganisa kanjani amakhasi wewebhu. Konke esikwaziyo ukuthi i-Google isebenzisa izici ezihlukahlukene ezingaphezu kuka-200, okubaluleke kakhulu kuzo zonke i-AI-algorithm, backlink, nokuqukethwe. Ngaphandle kwalokho, siyazi ukuthi i-Google iqhubeka nokuhlola ngemishini kanye ne-AI-algorithms entsha. Kunzima ukuhlala usesikhathini ngokuguqulwa okuqhubekayo kwe-Google, yingakho noma yimuphi umkhankaso wokwenza injini yokusesha awukwazi ukukunika isiqinisekiso esingu-100% sempumelelo yakho yebhizinisi le-intanethi. Kodwa-ke, sisengasondelana kakhulu nalokho i-Google iphakamise ngokusebenzisa ezinye izindlela zokubheka okudingekayo eziqinisekisiwe. Ake sixoxe kabanzi ngezinye zazo.
Ama-Backlink ahlelwe ngamagama angukhiye AKUFANELE!
Ngaphansi komkhankaso wakho wokwenza ngcono, udinga ukuthola amakhasi aphezulu aphezulu wegama lakho elingukhiye kanye nenombolo nekhwalithi ye-backlink lawa makhasi wewebhu. Ukuze ukhethe amagama anamandla okucinga, ungasebenzisa elinye lamathuluzi enethiwekhi asebenzayo - Semalt SEO Auto , i-SEMRush noma i-MOZ. Bonke bazokunikeza idatha enembile nekhwalithi nokusiza ukuthuthukisa i-website SEO. Ayikho yalezi zikhululekile, kodwa ngokwesibonelo, i-Semalt inikeza amaklayenti isikhathi sokuvivinya samahhala esiza ukuqonda ukuthi yiziphi izinzuzo le software engayenza ibhizinisi lakho le-intanethi.
Ukusebenzisa amathuluzi wokwenza ubuchwepheshe, uzokwazi ukuqonda ukuthi yiziphi amagama angukhiye aphezulu abadlali bakho nabokuzibeka ku-SERP. Ngaphezu kwalokho, uzobona ukubaluleka kwesizinda. Isixhumanisi esingaphezulu kwesizinda ekhasini, i-Google ephakeme izoyibeka emiphumeleni yayo yosesho.
Nokho, ezinsukwini zethu, ubuningi bendima ebalulekile kakhulu kunekhwalithi uma kuziwa emuva kwe-backlinks. Yingakho isibalo sezixhumanisi zesizinda asenzi ukwehla kwezikhundla ezi-1 kuya kwezingu-10. Inani langempela lesizinda likhonjiswa ngu-UR noma i-URL Isilinganiselwa. I-UR isebenza njengekhwalithi enqunyiwe yezizinda ezixhumanisa kuwebhusayithi.
Ukukala okusezingeni ku-SERP, udinga okuningi okwehliswa kahle futhi okuhle kakhulu ngemuva kokuvela kumakhomeni afanelekayo. Ngaphezu kwalokho, imibhalo yakho ye-backlink anchor kufanele ibe namagama angukhiye afanelekayo nephezulu aphezulu azoba nelungelo elikhulu kwi-website yakho ye-SEO Source .